Ahoana ny fomba filalaovana Super Mario Run amin'ny Jailbreak | Vaovao IPhone
Luis Padilla | | Cydia, Lalao IPhone, maro
Omaly ny lalao nandrasana indrindra tamin'ny taona, Super Mario Run, dia tonga tao amin'ny App Store ihany. Ny anaram-boninahitra Nintendo 100% voalohany tonga ao amin'ny iPhone sy iPad miaraka amina olona malaza indrindra eo amin'ny tontolon'ny lalao video, mihoatra ny antony ampy hahatongavan'ny fanantenana ho lehibe. Fa ny tsy ampoizina tsy nampoizina izay hitan'ny mpampiasa maro dia ny tsy fandehany raha efa vita ny Jailbreak. Toy ny mahazatra, ny olana dia ny fiandohan'ny vahaolana, ary Cydia dia manolotra fomba tena tsotra hialana amin'ity fetra ity hahafahanao milalao Super Mario Run na dia efa vitanao aza ny Jailbreak. Manazava izany aminao eto ambany izahay.
Ny fisorohana ny rindranasa tsy hiasa amin'ny fitaovana Jailbroken dia zavatra miely patrana satria tsy misy ilana azy, ary maro ny fikajiana izay manampy ny Jailbreak tsy ho hita. Ilay hany tokana toa miasa miaraka amin'ny Super Mario Run dia antsoina hoe tsProtector 8+ (iOS 9 & 8), izay azo alaina ao amin'ny repository BigBoss ary maimaim-poana tanteraka. Raha vantany vao napetraka ao amin'ny fitaovanao ianao, ny sisa ataonao dia mankanesa any amin'ny menio Settings amin'ny fitaovanao, tadiavo ny faritra natokana ho an'ny tsProtector ary sokafy ny menio «Black List Apps», ao no hahitanao ny lalao Super Mario Run ankoatry ny fampiharana hafa fa nametraka ianao dia ampandehano ary efa azonao ampiasaina ny lalao Nintendo amin'ny iPhone sy iPad anao.
Nintendo dia mitandrina tsara amin'ny Super Mario Run ary tsy te handrava orinasa iray izay vao nanomboka ho an'ny orinasa Japoney ilay hacking. Ho fanampin'izay, misy foana ny olana ateraky ny hosoka, ireo fanovana mamela anao hahazo valisoa sy handroso haingana amin'ny lalao haingana kokoa amin'ny fomba "tsy ara-dalàna", ary izany dia hiafara amin'ny fanimbana ny zavatra niainan'ireo mpampiasa mifaninana amin'ny maody an-tserasera amin'ny alàlan'ny fatiantoka raha tsy mampiasa ireo fanovana ireo ianao. Izany no antony ilana fifandraisana Internet mavitrika hilalao Super Mario Run ary nampihatra io fetra io ihany koa ho an'ny Jailbreak.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Ahoana ny fomba filalaovana Super Mario Run miaraka amin'ny Jailbreak
Realzeus dia hoy izy:
Tsy haiko raha sendra olona iray izany zavatra izany, saingy manana ny olana aho ary tsy mbola nanao ny jailbreak. Mazava fa nanana ny jailbreak aho tao amin'ny iOS 9.3.3 ary nanavao ny iOS 10. Fantatrao ve ny vahaolana amin'ny olana?
Valiny tamin'i Realzeus
Toy izany koa no mitranga amin'ireo olona nanjary jailbreak tamin'ny androny nefa tsy manana izany ankehitriny. Ary inona no vahaolana ho antsika?
wintomac911 dia hoy izy:
Ny olana dia rehefa manavao iPhone amin'ny Jailbreak ianao dia voakasik'izany ny rafitra fiasa na dia toa normal aza ny zava-drehetra. Soso-kevitra: Manaova tahiry ao amin'ny iCloud amin'ny mombamomba anao rehetra na amin'ny alàlan'ny iTools na programa hafa ankoatry ny iTunes, satria raha manao backup miaraka amin'ity farany ianao dia mamonjy ireo olana sedrain'ny rafitra io. Avereno ny iPhone dia vita ianao.
Valiny amin'ny wintomac911
Salvax iray dia hoy izy:
Apetraho amin'ny maody fanarenana ireo telefaona ary avereno amin'ny laoniny ny volo ary vita ny olana
Valio i Salvax iray
Ary aza asiana backup
tgffgfffd dia hoy izy:
izany… ..tsy hamerina amin'ny laoniny ny backup…. apetraho toy ny iphone vaovao ,,, ary raikitra
Valio i tgffgfffd
Manana Jailbreak iOS 9.3.5 aho ary tena mety amiko izany. iPhone 6s
johnattan02 dia hoy izy:
Manana jailbreak aho ary nametraka ilay Tweak napetrako ao anaty lisitra mainty ny lalao ary toy izany koa no manakatona azy rehefa manokatra azy aho, tonga eo amin'ny efijery mena fotsiny izy, inona no tokony hatao satria toa tsy mandeha ny sProtector
Mamaly an'i johnattan02
Jose Ignacio Sel dia hoy izy:
Tsy maintsy nanam-bintana aho! Manana Jailbreak aho ary tsy mila mametraka an'io tweak io ... mandeha tsara hatramin'ny voalohany. Andeha hojerentsika raha misy ny vintana ary mamorona zavatra hananana izany feno izy ireo nefa tsy mandoa ...
Valiny tamin'i José Ignacio Sel
Ny fanambarana iPhone 7 vaovao any Japon dia manasongadina ny hafainganan'ny fampiasana Apple Pay